ဗီတာမင် - K
“ဗီတာမင်-K ကိုမှ လိုအပ်တာထက်ပိုသောက်ရင် သွေးခဲတဲ့နေရာမှာ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်”
ကိုယ်ခန္ဓာဖွံ့ဖြိုးစေရန်၊ အာဟာရပြည့်ဝစွာရရှိစေရန်အတွက် ဗီတာမင်အားဆေးများကို ကလေးလူကြီးမရွေး ယခင်ကထက် သောက်သုံးလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အဆိုပါအားဆေးများကို လိုအပ်၍ သောက်သုံးခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး လိုအပ်သည်ထက် ပိုမိုသောက်သုံးမိသူများတွင် ဗီတာမင်အဆိပ်သင့်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ထို့အတွက် ဗီတာမင်-K နှင့် ပတ်သက်သည်များကို အာဟာရပညာရှင် ဒေါက်တာညီညီကျော်နှင့် The Voice Daily က မေးမြန်းထားသည်များကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Voice : ဗီတာမင်-K ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါဦ။
Dr.NNK : ဗီတာမင်-K နှစ်မျိုးရှိတယ်။ K1 နဲ့ K2 ဆိုပြီးတော့ပါ။ K1 က အစိမ်းရင့်ရောင် အသီးအရွက် တွေမှာပါပြီးတော့ K2 ကတော့ အသားအမျိုးမျိုး၊ ဥအမျိုးမျိုးနဲ့ ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲတွေမှာပါပါတယ်။ ဗီတာမင်-K က သွေးခဲစေတဲ့သတ္တိရှိတယ်။
Voice : ဗီတာမင်-K ချို့တဲ့ရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
Dr.NNK : ချို့တဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သွေးမတိတ်တဲ့ရောဂါဖြစ်တယ်။ မွေးကင်းစကလေးတွေမှာ ချို့တဲ့တာအဖြစ်များတယ်။ လူကြီးတွေမှာတော့ အူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရောဂါရှိတဲ့သူတွေ ဖြစ်တယ်။ Crohn’s Disease နဲ့ Celiac Disease တွေမှာ ဗီတာမင်-K ကို သေချာမစုပ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် ချို့တဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် အာဟာရအရမ်းချို့တဲ့လွန်းတဲ့သူတွေ၊ ပိန်လွန်းတဲ့သူတွေနဲ့ အရက်အရမ်းသောက်တဲ့ သူတွေမှာတော့ ဗီတာမင်-K ဓာတ်ကို ချို့တဲ့စေတယ်။ ကလေးမွေးမွေးပြီးချင်း ဗီတာမင်-K ချို့တဲ့တာတွေရှိတယ်။ ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် ကလေးမွေးပြီးပြီးချင်း ဗီတာမင်-K ထိုးပေးလိုက်တာတွေရှိတယ်။ အူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တာက သူ့ရဲ့ အူလမ်းကြောင်း ကိုက ဗီတာမင်-K ရယ်မှမဟုတ်ဘဲ တခြားဗီတာမင်တွေကိုလည်း မစုပ်နိုင်ဘူး။ ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ အူလမ်းကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် စုပ်ယူမှုအားနည်းတယ်။ ဒီတော့ တခြားဗီတာမင်ဓာတ်တွေပါချို့တဲ့တယ်။ အရက်သောက်တဲ့သူတွေကျတော့ အစားအသောက် ကောင်းကောင်းမစားတဲ့အတွက် ချို့တဲ့တယ်။
Voice : အခုသောက်နေကြတဲ့ ဗီတာမင်-K အားဆေးတွေနဲ့ကရော ဘယ်လိုရလဒ်တွေ ရှိနိုင်ပါသလဲ။
Dr.NNK : ဗီတာမင်-K အားဆေးတွေကို မလိုအပ်ဘဲနဲ့ သောက်စရာမလိုဘူး။ အရမ်းချို့တဲ့လွန်းတဲ့သူတွေကတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြပြီးတော့မှ ဘယ်လောက်သောက်သင့်သလဲ ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်သင့်တယ်။ ပုံမှန်လူတွေအတွက်တော့ ဗီတာမင်-K က သတ်သတ်ကြီး လုပ်ယူသောက်စရာမလိုဘူး။ အားဆေးတွေမှာက Multi Vitamin တွေ များတယ်။ လူကြီးသောက်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်ပါတဲ့ဆေးတွေမှာ ဗီတာမင်-K သိပ်မပါတော့ ပြဿနာမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဗီတာမင် -K ဆိုပြီးတော့ တကူးတကကြီး ဆေးလုံးတွေသောက်လာကြတယ်။ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ကို ဗီတာမင် - D နဲ့တွဲပြီး ရောသောက်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုးစားနေကျ အခြေခံအစားအစာထဲမှာ ပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် ချို့တဲ့မှာပူစရာမလိုဘူး။ အစားအသောက်မှာတင် အပြည့်အဝရတယ်။ ဗီတာမင်-K ချို့တဲ့တဲ့သူတွေကတော့ ဖြည့်စွက်အနေနဲ့သောက်သင့်တဲ့ ပမာဏကရှိပြီးသားပါ။
Voice : လူတစ်ယောက်မှာ ဗီတာမင်-K တစ်နေ့ကို ဘယ်လောက်လိုပါသလဲ။
Dr.NNK : တစ်နေ့တာကို အသက်ခြောက်လအထိ 2Microgram? အသက် ၇ လမှ ၁ နှစ်အထိ 2.5Microgram? အသက် ၁ နှစ်ကနေ ၃ နှစ်အထိ 30Microgram၊ အသက် ၄ နှစ်ကနေ ၈ နှစ်အထိ 55Microgram၊ အသက် ၉ နှစ်ကနေ ၁၃ နှစ်အထိ 60Microgram၊ အသက် ၁၄ နှစ်ကနေ ၁၈ နှစ်အထိ 75Microgram? အမျိုးသမီးအသက် ၁၉ နှစ်နဲ့အထက် 90Microgram လိုတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင် (အသက် ၁၉ နှစ်ကနေ ၅၀) 75 Microgram၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင် (အသက်၁၉ နှစ်အောက်) 75Microgram နဲ့ အမျိုးသား ၁၉ နှစ်နဲ့ အထက်ကတော့ 120Microgram တွေပါ။ အခုပြောတဲ့ ပမာဏတွေကတော့ နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အသီးအရွက်၊ အသား၊ ဥ၊ ဒိန်ခဲနဲ့ ပဲစိမ်းလုံး စတာတွေကနေ လုံလောက်စွာရရှိပါတယ်။
Voice : ဟုတ်ကဲ့။ နေ့စဉ်အစားအစာတွေက ဗီတာမင်-K ရတယ်။ ဒါကိုမှ အားဆေးတွေထပ်သောက်ရင်ရော ဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရလာနိုင်မလဲ။
Dr.NNK : ဗီတာမင်-K က ဗီတာမင်အစုံပါတဲ့ အားဆေးတွေမှာပါတာနည်းတယ်။ ဗီတာမင်-K ကိုမှ လိုအပ်တာထက်ပိုသောက်ရင် သွေးခဲတဲ့နေရာမှာ ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ သွေးကြဲဆေး၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ကင်ဆာဆေး၊ သွေးတွင်းကို လက်စထရောကျစေတဲ့ ဆေးတွေသောက်နေတဲ့သူတွေမှာဆိုရင် ဗီတာမင်-K ကြောင့် သူတို့နဂိုသောက်နေတဲ့ဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကိုကျစေတယ်။ အဲဒီလိုဆေးတွေ သောက်နေရတဲ့သူတွေကို ဗီတာမင်-K မသောက်ခိုင်းသင့်ဘူး။ အစားအစာကနေရတဲ့ ဗီတာမင်-K လောက်က ပြဿနာမရှိပေမယ့် တကူးတကသောက်ရင် ကိုယ်ရဲ့ရောဂါကြောင့်သောက်နေရတဲ့ဆေးတွေရဲ့ အာနိသင်ကပျက်ပြီး ရှိရင်းစွဲရောဂါတွေက ပိုဆိုးလာစေတယ်။
Voice : ဆရာ့အနေနဲ့ ဗီတာမင်-K နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူထုအတွက် သတင်းစကားပါးပေးပါဦး။
Dr.NNK : လတ်တလောပတ်ဝန်းကျင်မှာ တွေ့နေရတာက ဗီတာမင်-K အားဆေးတွေကို မလိုအပ်ဘဲနဲ့ သောက်နေတာတွေပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် တကူးတက လုပ်ယူသောက်စရာမလိုပါဘူး။ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ၊ ဒုက္ခ အရောက်ခံပြီး ဒီအားဆေးတွေ ထပ်သောက်စရာ မလိုပါဘူး။ သဘာဝကရတဲ့ ဗီတာမင်-K နဲ့ပဲ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်တဲ့ပမာဏနဲ့က ကိုက်ညီမှုရှိပြီးသားပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။